Sei kumirira iyo UNWTO General Assembly? New secretary General atoiswa kare?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » Sei kumirira iyo UNWTO General Assembly? New secretary General atoiswa kare?
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Georgia Kuputsa Nhau • vanhu • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Ndiro sarudzo dzinonyanya kutaurwa nezvadzo uye dzinokwikwidzwa nekomiti yepamusoro yeUnited Nations World Tourism Organisation (UNWTO). Vatungamiriri vazhinji vepasirese indasitiri yekushanya uye yekushanya pamwe nehurumende vakaratidza kusahadzika kwakanyanya kana inotevera UNWTO General Assembly ikasimbisa kurudziro neKanzuru yeKanzuru panguva ino.
Iyi simbiso inodikanwa kune mumiriri anokunda mumiriri Ambassador Zurab Pololikashvili. Izvi zvichaitika panguva yakazara yeUNWTO General Assembly muChengdu, China munaGunyana 2017.
Pane imwe nguva yakasimbiswa izwi renhau UNWTO Secretary General ichatanga Ndira 1, 2018
Iyo nguva kubva munaGunyana kusvika pakupera kwegore inogona kushandiswa nyore nyore kuti iyezvino Secretary General aratidze Secretary General-Elect kuti mashandiro acho anoshanda.
Sekureva kweruzivo rwakatambirwa neTN, maitiro aya akatotanga kare uye munhu mutsva asati asimbiswa. Vamwe mukati meSangano vanoshamisika uye vanonetsekana, vamwe vanoona zvichirairwa kune mutsva anokwanisa kuita mukuru wezvekushanya kutora chikamu mumisangano yepamusoro.
VaPololikasvili vakapinda nhaurirano mbiri dzepamusoro dzevatungamiriri muMadrid, kazhinji dzinongovhurwa kuna Secretary General nedenderedzwa ravo remukati nevatungamiriri.
"Secretary General UNWTO" ndiye zita remumiriri Pololikashvili rakazvibudisira iye awards-tourism.com . Mibairo inozivikanwa se "Oscar" yekuzivikanwa kwekushanya kweGeorgia. Iyo National Tourism Awards inodada yakagadza Zurab zvakare sedare.
Mubairo unowana rutsigiro rukuru kubva kuhurumende yeGeorgia uye kubva kune yakazvimiririra chikamu. National Tourism Administration yeGeorgia mubatanidzi weprojekti iyi, Bazi reEconomics uye Sustainable Development yeGeorgia neTbilisi City Hall ndeVatsigiri vepamutemo.
Chinangwa chikuru cheprojekti ndechekukurudzira indasitiri yekushanya uye yekugamuchira vaeni kuGeorgia uye kusimudzira kuzivikanwa kwebhizimusi rekushanya riri kubudirira uye zvigadzirwa zvinoumba mufananidzo wakanaka wenyika pasirese.
Mutambo wekupa mubairo uyu mukana wekuunza pamwe zviremera zvepasirese uye zvemunharaunda, mahotera, maresitorendi, vashanyi vekushanya, vamiririri vekufamba, makambani ewaini nezvimwe.
Ehe, vanhu vemuGeorgia vanofamba uye indasitiri yekushanya vanofara kuve nemumwe munhu anobva munyika yavo kuti asarudzirwe basa repamusoro mukushanya. Zvinogona kutsanangura kuti mumwe angadai akaregeredza chinzvimbo ichi chisati chasimbiswa.
Chimwe chiitiko chakashamisa ndechekuti Pololikashvili asangane negurukota rezvekushanya reBulgaria Angelkova ndokukurukura nyaya dzakanangana neUNWTO chete uye kwete chero chinhu chakanangana nenyaya dzepakati peGeorgia neBulgaria.
Chirevo munhau dzeBulgaria chakati: "Gurukota rezvekushanya muBulgaria Angelkova akasangana neMunyori-Mukuru weUNWTO Nominee Pololikashvili akaita musangano unoshanda muBelgrad paMusangano weKushanya Kwakasimba muDanube Region."
“Vaviri ava vakafunga mikana yekushandira pamwe pakati pebazi rezvekushanyirwa neUNWTO, pamwe nezvirongwa zvakabatana zvekusimudzira budiriro yechikamu. "Angelkova akajaidza Pololikashvili nematanho akatorwa neBulgaria mukusimudzira budiriro yezvekushanya uye akamuvimbisa kuti nyika ino ichaenderera kuva imwe yenhengo dzeUNWTO dzinoshingairira basa."
Gurukota reBulgaria rakaudza mutori venhau kumusangano wevatori venhau Bulgaria yakatsigira mumiriri weGeorgia nevhoti yavo. Bulgaria inhengo yeUNWTO Executive Council.
Kwaigona kuve kufamba kwakanaka kuti Zurab itarisane nenhepfenyuro uye ipindure mimwe mibvunzo nezve musangano uyu nedzimwe nyaya. Kujeka uku hakuna kuitika.